नेकपाको विवाद ओझेलमा पार्न ओली सफल – Karnalisandesh
नेकपाको विवाद ओझेलमा पार्न ओली सफल
प्रकाशित मितिः २८ असार २०७७, आईतवार १७:०४ July 12, 2020
काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेतासँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भेटवार्ता गरेपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरोधी खेमा शिथिल प्राय बनेको विश्लेषण हुन थालेका छन्।
खासगरी ओली पक्षका केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका नेताहरुले ओलीको चट्टानी अडानले काम गरेको दाबी गर्छन। ओली इतर प्रचण्ड-नेपाल समूह मध्य को बलियो बन्यो ? या को कमजोर बन्यो ? त्यसको हिसाब किताब हुँदै गर्ला। सत्य कुरा के हो भने जब नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। त्यो बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन्देश बोकेर राजदूत यान्छीको सक्रिय बढ्याे। उनले नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेपछि ओलीविरुद्धमा उठेका आवाजहरु मधुरो सुनिन थालेका छन्।
नेकपा फुटको संघारमा पुगेको अवस्थामा असार १९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेकी यान्छीले २१ गते नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, २३ गते झलनाथ खनाल र २५ गते कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटी चिनियाँ राष्ट्रपति सी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को सन्देश सुनाएकी थिइन्। भनिन्छ, सन्देशमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ राष्ट्रपतिको चाहना नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट भएको हेर्ने भनिएकाे थियाे।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार चितवन पुगेर सतर्कतापूर्वक पार्टीभित्र संघर्ष गरिरहेको बताए। उनले आफू संम्यमित नबनेको भए जे पनि हुन सक्थ्यो भनेर बोले। उनको अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर भन्ने हो भने प्रचण्ड-माधव पक्ष ओलीभन्दा बढी संम्वेदनशील बनेको भन्ने बुझिन्छ। नभए त नेकपा फुटबाट नरोकिने अवस्था आएकै रहेछ। अर्को तर्फ राजदूत यान्छीसँगको भेटपछि दाहाल, नेपाल, खनाललगायत नेता ओलीविरुद्धको दन्किएको विरोधको आगो बिस्तारै कमजोर बनाउनेमा पुगे।
नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन सक्रिय बनेकी राजदूत यान्छीकाे विषयलाई लिएर हस्तक्षेप र नाजायज विषयका रुपमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छन्। भारतीय राजदूतले यसअघि नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न यस्तै प्रकारका भेटघाट गर्दा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध हुन्थ्यो। अहिले नेकपाको विवाद मिलाउन चिनियाँ राजदूत यान्छीको सक्रियता र दौडधुपलाई लिएर ‘नेकपाको आन्तरिक विवादमा चीनको हस्तक्षेप’ भनेर फेरि टिप्पणी गर्न थालिएको छ।
असार १० देखि सुरु नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आन्तरिक किचलोका कारण निष्कर्ष विहिन बन्दै छ। कमिटीको बैठकमा दाहाल, नेपाललगायत बहुमत सदस्यले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनेपछि विवाद चर्किएको थियो। ओलीले दुवै पद नछाड्ने चट्टानी अडान राखेपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आगामी साउन २ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन क्रममा पार्टीको आन्तरिक विवाद स्वयं पार्टीले नै मिलाउने बताएका थिए। साथै ओलीले बाढीपहिरो दुई महिनासम्म रहने भन्दै शत्ताभन्दा जनताको उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित बन्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। यसरी हेर्दा ओलीले आफूविरुद्ध उर्लेको आन्तरिक विवादको बाढीलाई प्राकृतिक बाढीका नाममा दुई महिनासम्मलाई टार्न सफलसमेत बनेका छन्। ओली आफ्ना विरुद्धमा जुन सुकै शक्ति लागे पनि टसकोमस नहुने मनसायमा देखिन्छन्।
भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने खेल सुरु गरेको र नेकपाका नेताहरु परिचालित बनेको (असार १४) अभिव्यक्ति दिएका पधानमन्त्री ओलीले जनताको साथसमेत पाएका छन्। दिनहुका देशभर भएका प्रदर्शनले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। ओलीको पक्षमा देखिएको जनलहरले विवादकाे आन्तरिक कारण जानेको थियो या थिएन ? त्यो अलग पाटो तर, ओलीको पक्षमा देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोनाको कहरलाई वास्ता नगरिकन प्रदर्शन भएका थिए।